Interview « Ramkeshar’s World
FM Interview with Prachand
माधव नेपालको सरकार एक दिन पनि चल्दैनः दाहाल
जनताले ढाल्छन् । हामीले ढाल्नै पदैन । जनताले पहिलेनै फैसला गरेका हुन नी । तिमीहरू नेतृत्व गर्ने हैन भनेर । त्यसकारण माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बन्ने सरकार एक दिन पनि चल्दैन।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेले राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदम असंवैधानिक हो भनेमा नेता माधवकुमार नेपाललाई र्समर्थन गर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सही हो भनेर आए नेपाललाई समर्थन गर्र्छौं’ उनले भने । संसदमा राष्ट्रपतिको कदमको बहस गर्ने सहमति भए संसद सुचारु गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । दाहालले राष्ट्रपतिको कदम राजनीतिक भएकाले संसदमा बहस गर्न मिल्ने दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल एफएमका लागि सरोज दाहाल र सचिन रोकाले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्री ज्यू , अबदेखि सदन अवरूद्ध गर्दैनौँ भनेर तपाईले अस्ति नै भनिसक्नु भएको थियो तर किन त्यो लागू भएन ?
मैले अस्ति एक कार्यक्रममा संसद अवरोध गदैनौ भनेको थिए । हिजो (सोमबार) हाम्रो बैठकमा भएको निर्णयसदन खोल्ने तयारीको निर्णयहो । किनकी हामीले जे कारणले सदन अवरोध गर्‍यौँ त्यसलाई सदन भित्रै सम्बोधन गर्ने वातावरण भएपछि सदन खुल्छ । तर यति ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा जसको कारणले देशव्यापी एउटा बहस पनि चलेको छ । सदन अवरूद्ध भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । हिजो हाम्रो बैठकमा त्यो निर्णयलिने वित्तिकै सभाअध्यक्षलाई बोलाएर संसद खोल्ने तयारी गर्नुपर्‍यो, त्यसका निम्ति राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको बारेमा बहस गर्ने कुनै प्रस्तावमार्फ् छलफल गर्ने गरौँ सदन खुल्छ भनेर मैले भनेँ यसमा मूलतः मैले उहाँको सकारात्मक धारणा पाए । त्यसको निम्ति राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्‍यो । त्यो सहमतिको प्रक्रिया चलेको छ । मलाई लाग्छ आज (मङ्गलबार) दिनभरीमा त्यसमा सहमति भयो भने एउटा प्रस्ताव पेश हुन्छ । बहस हुन्छ । अनि एउटा टुङ्गोमा पुगिन्छ । सरकार बन्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको कदम बारे सदनमा बहस गर्नुपर्ने अडान तपाईहरूले राख्दै आउनु भएको छ, तर अन्तरिम संविधानको धारा ६० मा स्पष्ट रूपले अदालतमा पुगेको मुद्दाको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा बहस गर्न नपाउने भनेर लेखिएको छ नि ?
यो कुरा पनि बडो विचित्रको छ । संसद पुनस्थापना गर्ने भनेर जतिबेला आन्दोलन चलेको थियो जतिबेला । खासगरेर नेपाली काङ्ग्रेस एउटाले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरेको थियो । अरुले चाँही सिधै संविधानसभा अन्तरिम सरकार बनाएर जानर्ुपर्छ भन्ने कुरा थियो । र पनि त्यो मुद्दा फेरि अदालतमा थियो । अदालतमा मुद्दा चलिराखेकै बेला संसद पुनर्स्थापना भयो । त्यो संसदले थुप्रै निर्णयगर्‍यो र दर्ुइ वर्षछि मात्रै अदालतबाट फैसला आयो ।
पहिलो कुरा यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसको कुनै अर्थ छैन । मुद्दा अदालतमा चल्दै गर्छ राजनीतिक समस्याको समाधान पनि खोज्दै जानर्ुपर्छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रपतिले यो विषय न्याय क्षेत्रको विषय नै होइन्, सेनापतिलाई पुनर्स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित विषय न्याय क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभाको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट । यसले त झन प्रष्ट के गर्‍यो भने यो विषय राजनीतिक विषय हो । यसको समाधान राजनीतिक ढङ्गबाट खोजिनर्ुपर्छ भन्ने प्रष्ट गरेको छ । त्यस कारण सदन भित्र यसलाई प्रवेश गर्न नहुने, बहस गर्न नहुने भन्ने तर्क यथार्तमा कतर्क मात्रै हो ।
तपाईहरूले सदनमा पेश गर्नको लागि सङ्कल्प प्रस्तावको तयारी पनि गर्नु भएको छ रे , खास के कुरा छ त्यसमा ?
त्यसमा मुख्यतः नागरिक सर्वोच्चता स्थापना गर्ने कुरा र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउने विषयमा सङ्कल्प प्रस्तावको सार छ ।
तपाईले विदेशी प्रभुको सामु नझुक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट एकाएक राजिनामा गर्नुभयो, कुन विदेशी प्रभुले के भनेर झुकाउन खोजेका थिए र ?
यो कुरा नेपाली जनताले प्रष्ट बुझिसकेका छन् । नेपालको बुद्धिजीवी मात्रै होइन सामान्य मजदुर र किसानले पनि विदेशी प्रभु भन्नाले के हो र हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो ? हामी आफ्नो बारेमा फैसला गर्ने अधिकार हामीसँगै हुनर्ुपर्छ भनेको के हो ? कस्ले यहाँ बढि हस्तक्षेप गर्छ भन्नेकुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसकारण नामै लिएर भन्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छैन् ।
नेपालीहरूको आत्मस्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकार कुन्ठित भएको भनेर तपाईहरूले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ, के आधारमा त्यसो भन्नुभाको हो ?
कुन्ठित कुन थालेको त लामो समयदेखि नै हो नेपालमा । अहिलेमात्रै गरियो, पहिले थिएन भन्ने मेरो भनाइ होइन् । नेपालमा सुगौली सन्धिदेखिनै यो देश कुनै न कुनै रूपमा चै अर्धऔपनीवेश बनेर आयो । यहाँको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदै आयो । खास गरेर त्यती बेलाको अङ्ग्रेज भारतको हस्तक्षेप निरन्तर रहृयो । उनीहरूको प्रभुत्व कुनै न कुनै रूपमा रहृयो । त्यो अहिले पनि निरन्तर कायम छ ।
तर १० वर्षो महान जनयुद्ध र त्यसको जगमा खडा भएको १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जुन ठूलो आन्दोलन यो देशमा भयो । पहिलोको सामन्ति शाही राजतन्त्र जहिले पनि विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्ने र खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने कडो नक्कली राष्ट्रवाद भयो । अहिले त नाङ्गै देखियो । त्यो नेपाली जनताले स्पष्ट ढङ्गले बुझ्ने गरेर देखिएको छ । सामन्तहरूको राष्ट्रवाद, मण्डले राष्ट्रवाद कति कोक्रो, बाहिर घुँडा टेक्ने खालको थियो । सार तिनीहरूको अराष्ट्रिय थियो भन्नेकुरा अहिले राम्रोसँग देखिएको छ ।
तर, यो आन्दोलनपछि जुन परिवर्तन भयो, संविधानसभामा क्रान्तिकारी पार्टीलाई नेतृत्व सुम्पिने काम गर्‍यो । त्यसपछि मलाई लागेको थियो की अब हामी पहिलेको भन्दा धेरै स्वतन्त्र भयौँ । हामी हाम्र्रो बारेमा निर्णयगर्नको लागि कुनै विदेशी प्रभुहरूको मुख ताक्नु पर्देन । म प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै मनमा के फैसला गरेको थिए भने पुराना प्रधानमन्त्री भन्दा भिन्न गरिकाले अघि बढ्छु । प्रधानमन्त्री बन्ने वित्तिकै चीनको ओलम्पिक खेलमा गए । त्यो हर्ेदा सामान्य मात्रै थियो तर इतिहासको एउटा गलत परम्परा तोड्नका लागि गरेको हो । त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, हामीले आफ्नो बारेमा गर्ने निर्णयो अधिकार आफैसँग सुरक्षित थियो ।
त्यही बेलोदेखिनै मैले के अनिभूत गरेको थिए प्रतिक्रियावादीहरू पुरानै तरिकाले चलाउन चाहन्छन् । यो मुद्दा अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो ।
तर तपाईं चीनबाट फर्किने वित्तिकै मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुन्छ । चीनमा त खेलका लागि मात्रै गएको भन्नुभएको थियो नी ?
यो भनाईलाई अनावश्यक रूपमा उचालियो । म चीन गएकै हो । त्यहाँका नेताहरूसँग भेट भएकै हो । त्यसपछि म भारत भ्रमणमा जाँदै थिए । चीनमा म ओलम्पिकका लागि भएको थिए । भारतमा म कुनै खेलका लागि जाँदै थिइन् । राजनीतिकै भ्रमण हुन्थ्यो त्यो । एउटालाई धेरै र अर्कोलाई थोरै महत्व दिने कुरा थिएन त्यो । म चीन गएर आइसक्या थे । यो कुरो इतिहासमा लेखिसकेको थियो ।
तपाईले विदेशी प्रभुुको हवाला दिँदै राजिनामा गरिहँदा अर्को के कुरा पनि बाहिर आयो भने प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने मामलामा तपाईहरूलाई चीनले र्समर्थन गरेको थियो रे हो ?
त्यो चै गलत हो । मेरो जानकारीमा छैन् । चीनले रुक्माङ्गत कटवाल हटाउने प्रकरणमा र्समर्थन गरेको थियो भन्ने कुरा मेरो जाकारी अनुसार पूरै गलत हो । किनकी चीनले जतिबेला मसँग भेट्दाखेरि पनि राजदूत र अरुले भन्नेकुरा चै नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्दैन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा के गर्नुपर्छ त्यो नेपालीहरूले निर्णयगर्ने कुरा हो । हाम्रो केही भन्नु छैन् । यहि हो चिनियाँहरूले मसँग भन्ने गरेको । अन्यत्र कहीँ केही कुरा भएको छ भने मलाई थाहा छैन् ।
तपाई आफूलाई नेपालकै इतिहासमा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको प्रधानमन्त्री बताउनहुन्छ, अनि तपाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेता पनि, तर सरकारमा टिक्न सक्नुभएन नि ?
म टिक्न नसकेको हैन । झुक्न नसकेको मात्रै हो । म अगाडि बढ्न चाहेको हुँ, पछि हट्न चाहेको हैन् । कुर्सीात्रै बचाउँन पाएको भए हजार दाउ थिए मसँग । यो राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान बचाउनु पर्छ भनेर म अघि बढेको हुँ । कतिपयले मलाई पछि हट्यो, प्रधानमन्त्री छोड्यो भन्ने पर्छसक्छ कतिपयलाई, तर कुरा ठिक त्यसको उल्टो हो । कुर्सीत्रै बचाउन खोज्ने जो परम्परा छ मैले त्यसलाई तोडेको हुँ । कुर्सीूलो होइन, जनता र राष्ट्र ठूलो हो । भन्नेकुरो स्थापित गर्न खोजेको हुँ । मलई यो कुर्सीम पुर्‍याएको पनि जनताले हो । कुनै विदेशी प्रभूहरूले होइन् । यसकारण कुर्सी टिक्न नसकेको म हैन ।
अबको नयाँ सरकार विदेशीहरूको इसारामा बन्न लागेको भनेर तपाईहरूले भनिरहनु भएको छ , त्यस्तो आरोप लगाउने आधार के छ तपाईहरूसँग ?
यो त करिव-करिव सबैले बुझेको कुरा हो । अहिले जसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा ठड्याइएको छ । त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि सारेको हो । त्यो कतैबाट मिल्दोजुल्दो लाग्दैन । एमालेलाई नै अगाडि सार्नु थियो भने अध्यक्ष छन्, चुनाव जीतेर आएका छन् । तर दर्ुइदर्ुइ ठाउँबाट चुनाव हारेर आएको मान्छेलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु किन पर्‍यो । लाटोले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने पार्टीलाई नेतृत्व दिने हो भने त्यसको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै हारेकै मान्छेलाई अघिसार्नु नेपाली काङ्ग्रेसकै बुद्धिको प्रतिफल हो । या नेपालमा हामीले जे भन्यो त्यही चल्छ । अरुले भनेको चल्दैन भन्ने विदेशी प्रभूहरूको बुद्धिको परिणाम हो । यो सबै विदेशी प्रभूहरूकै बुद्धिको परिणाम हो । नयाँ बन्न लागेको सरकार माधव नेपाल अथवा एमालेको बुद्धिले अगाडि सारिएको होइन् ।
एमाले नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा बन्ने सरकार कति समय टिक्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा त एक दिन पनि चल्दैन । त्यो चल्दै चल्दैन । जनताले कहाँ चल्न दिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ज्यु , त्यो सरकार चाहिँ ढाल्ने तपाईहरूले नै हो ?
जनताले ढाल्छन् । हामीले ढाल्नै पदैन । जनताले पहिलेनै फैसला गरेका हुन नी । तिमीहरू नेतृत्व गर्ने हैन भनेर । त्यसकारण माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बन्ने सरकार एक दिन पनि चल्दैन् ।
तपाईहरूले सहमतिको साथ संसदमा बहस गर्न पाउनर्ुपर्छ राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा भनेर भनिरहनु भएको छ । यदि त्यो बहस सुरु भयो भने त फेरि तपाइकै नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने कसर सुरु हुन्छ होला हैन ?
मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने शान्तिलाई निष्कर्षा पुर्‍याउने र संविधान लेख्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन् । मैले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईंले भोटमाग्दै हिड्ने होइन्, बुढो मान्छे भएर जनताले संविधानसभा चुनावमै लत्याएकालाई भोट माग्दै हिड्ने हो भनेर मैले यसरी नै भनेको हुँ । तपाईंले सबैलाई मिलाउने पो भूमिका खेल्नर्ुपर्छ, माधव जीलाई पनि तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नै चाहिएको हो भने किन यो उल्टो बाटो हिड्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएकै हो, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयवैधानिक हो भनेर सिधै आउनुहोस् दर्ुइ तिहाइ बहुमतले हामी तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छौं भनेकै हो मैले ।
तपाई माधवकुमार नेपाललाई फेरि स्वीकारनै चाहिरहनु भएको छैन व्यक्तिगत रूपमा उहाँ विरुद्ध लाग्नु भएको प्रष्ट देखिन्छ तर, तपाईले उहाँलाई बारम्बार भेटेर, संविधानसभामा सदस्य बन्न आग्रह गर्ने, अनि संवैधानिक समितिको सभापति बनाउने उहाँ जस्तो उच्च व्यक्ति संविधानसभाले पाएकेामा हामी सबै गर्व गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक समितिको बैठकमै सबैका सामु भन्नुभएकै हो अनि अहिले चाँही आफूले खाइ आएको प्रधानमन्त्री पद गुम्न लाग्यो भनेर आक्रोश पोख्ने यो पनि त सबै ले बुझेका होलान् नी ?
प्राविधिक रूपमा त्यो कुरा साँचो हो । उनलाई संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाउने म नै हो भन्दा पनि हुन्छ । उहाँ पहिलेको पनि संविधान बनाउने मध्येको एक सदस्य भएको र अध्ययन गरेको, अनुभव भएको हुनाले संविधानसभामा राम्रोसँग त्यो अनुभन सदुपयोग होस् भनेर मैले उहाँलाई त्यसमा त्याउन पहल गरैकै हुँ । तर प्रधानमनत्री बनाउन होइन् । प्रधानमन्त्री भिन्दै कुरा हो । राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले हर्ेर्ने हो भने त त्यो सुहाउँदैन नी । उहाँ त व्याविनेटद्वारा मनोनित हो । मनोनित सदस्य प्रधानमन्त्री हुनु कति लोकतान्त्रिक देखिन्छ ? निर्वाचितहरूको त्यत्रो जमात हुँदाहुँदै ।
तपाइकै भनाइ मान्ने हो भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार एक दिन भन्दा बढि टिक्दैन अनि एक दिनकै भए पनि प्रधानमन्त्री चाँही माधवकुमार नेपाल बन्छन् ?
राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसहि हो भने म उहाँलाई र्समर्थन गर्छर्ुु त्यो केही आपत्ति छैन् । त्यो कुरा मैले माधवजीलाई पनि भनेको थिए । तपाई किन रिमोर्ट कन्टोलबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोज्न थाल्नुभएको । राष्ट्र र जनताको पक्षमा आउनुहोस् म तपाईंलाई दर्ुइ तिहाई बहुमतले जिताउँछु ।
प्रचण्ड ज्यु, ल हर्ेर्नुस् त तपाईको कुरा कत्ति मज्जाको, आफूले भनेको मान्यो भने, उ तत्काल राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइहाल्ने, राष्ट्रवादी, अनि जनताबाट अनुमोदित, जनताको सम्मान सबै हुने तर आफ्नो पार्टीे नीति र चाहनामा कोही चलेन भने त्यो प्रभुको इसारामा चलेको, जनताबाट तीरस्कृत भएको हुन्छ यो त आफ्नै नीति मात्र लाद्ने मनसाय देखिएन र ?
इतिहासले देखाएको छ- राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा नीतिहरू, भनाईहरू, पोलिसीहरू केन्द्रित छन् । जसले यसलाई ठिक हो भनेर आउँछ त्यो राष्ट्रवादी हो । जसले ठिक होइन भन्छ त्यो अराष्ट्रिय हुन्छ । यो सोझो कुरा हो । हिजोको मण्डले अहिले माओवादीले भनेको ठिक हो भनेपछि उ चै सच्चिएको हुन्छ । हिजोको माओवादी अहिले ठिक छैन भनेर गयो भने त्यो चै विदेशी या सामन्तीको दलाल हुन्छ । माओवादी भनेको यो देशको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र, सङ्घीयता र परिवर्तनको निम्ति सबैभन्दा बढी बलिदानी गरेको र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको पार्टीो । यसको विरोध गरे त्यो बेठिक हुन्छ । र्समर्थन गरे त्यो ठिक हुन्छ । माओवादी जबसम्म राष्ट्र र जनता प्रति इमानदार हुन्छ यसको र्समर्थनमा आउँदै जानेमान्छे सच्चिँदै गएको हुन्छ नत्र बिग्रिदैँ गएको हुन्छ ।
हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विदेशी प्रभु मैले जसलाई भनेको छु । ति विदेशी प्रभुहरूले पनि अहिले चै ठिकै छ प्रचण्ड ठूलो पार्टीे प्रधानमन्त्री भएको हुनाले र्समर्थन गरे । तर मलाई गरेको र्समर्थन केमा आधारित थियो भने नेपाली जनताको निर्णया आधारित थियो । संविधानसभामा माओवादीले दर्ुइसय ३८ मत ल्याउँछ भनेर कसैले सोचेकै थिएन् । यति ठूलो पार्टीलाई सुरुमै रोक्न खोजे प्रभुहरू नाङ्गेझार हुने भए त्यसैले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएका हुन् । माओवादी सरकार बनाउन नदिन चार महिना त कसरत भएकै थियो । मलाई कसैले टिको लगाइदिएर प्रधानमन्त्री भएकै होइन् । म राष्ट्रियताको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।
अब हुन खोज्ने प्रधानमन्त्री रिमोट कन्ट्रोलबाट नाटकीय ढङ्गले अप्राकृतिक, अनैतिक अराजनीतिक ढङ्गले हुन खोजी राख्या छ । संसद किनबेच भइराख्या छ । फोरमको अहिलेको अवस्था जे भएको छ त्यो पनि किनबेचका कारणले नै हो । एउटै होटलमा दर्ुइ दर्जन सभासद्लाई राखेर मनोरञ्जन दिएर राख्ने यो के तरिका हो ? यो मिडियाले नभनेको मात्रै हो ।
तपाईले भन्नुभएको कुरा सुन्दा त सबै ठिकै जस्तो लाग्छ तर तिनै विदेशी राजदूतहरूले नेपालमा आएर ओहादाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रम काहिले हो निश्चित छैन, तपाईलाई सिधै आएर भेट्ने अवसर पाउँछन्, तपाईनै हो भारतीय राजदूतलाई प्रधानसेनापतिको विषयमा लगातार आधादर्जन पटक भेट्ने, अनि उसले पनि नमानेपछि सचिव स्तरको व्यक्तिलाई बोलाइदिनु न भन्ने, पछि त्यो व्यक्ति नआएपछि मैले के गर्ने कुरा गर्नै पाइन भने यो त सरासर दोहोरो चरित्र भएन भन्या ?
यी सबै प्रचारबाजी हुन् । यो प्रतिक्रियावादीहरूले फूदाँ जोडेर सर्न्दर्भविहीन कुरा । दर्ुइ वर्षघिको टेप ल्याएजस्तो गर्‍या मात्रै हो । जब म कटवाल प्रकरणमा अघि बढिराखेको थिए राजदूतहरूले यो कार्य नगरियोस् भन्ने थियो । भारतीय राजदूत राकेश सूदसँगको कुराकानीमा पनि यो विषयमा कुरा भएकै हो । मैले उनलाई यो विषयमा तिमीसँग कुरा गरेर साध्य छैन् जरुरी पर्छ भने त्रि्रा ठूला अफिसरहरूलाई बोलाउ, उनीहरूसँग कुरा गर्छर्ुुनेको हुँ मैले । फटाहाहरूले उल्टोपाल्टो पारे । जनताले राम्रोसँग बुझिदिनुपर्‍यो । मैले उनीहरू सामु झुक्नका लागि होइन । जे गरेको छु ठिक गरेको छु भन्नलाई पो बोलाउ भनेको हुँ । यहाँ त कुर्सीोगाउन र झुुक्नको लागि आइदेउ भन्यो भनेर प्रचार भयो । यो चै शब्दहरूलाई जोडेर बनाइएको प्रचारबाजी मात्रै हो ।
दक्षिणको यसरी विरोध गरिरहँदा उत्तरलाई त यहाँ भित्रि रूपमा आफ्नो भूमिका बढाउन ठाँउ दिनुभएको उदाहरण पनि छन् नी ?
मैले उत्तर र दक्षिण भनेर भेद गर्न खोजेकै छैन् । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर हिड्न चाहन्छौं । एउटासँग पूरै ढल्किने, अर्कोको व्यवस्था गर्ने हाम्रो सरकारको गरेको छैन गर्न सक्दैन । भारतसँग भएका १९५० लगायतका सन्धीहरूलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउनेतर्फसरकार अघि बढ्छ मैले भनेकै थिए । भारत भ्रमणमा जाँदा त्यो कुरा स्पष्ट राखेपनि । यसकारण मैले दुवै छिमेकीसँग बराबरीको सम्बन्ध बनाउने र नेपाल राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिने कुरामा कहि कतै केही बाँकी राखे भन्ने मलाई लागेको छैन् ।
अब तपार्इंले धेरै कुरा गर्नुभयो अब अन्त्यमा, तपाईले जसरी सबै पक्षको विरोध गर्नुभयो, सरकराबाट हट्दा विदेशीको अगाडि नझुक्ने भन्नुभयो तर खासकुरा चाँही तपाईको सत्ता जानुमा चाँही तपाई जसलाई बाहिरी रूपमा दोष दिए पनि भित्रि गाँठी कुरा चाँही पार्टीभत्रकै आन्तरिक बिवादले ने तपाईलाई यो अवस्थ्ामा ल्यायो भन्छन् ?
हामी महाधिवेशतर्फजानेकुरा सोच्दैछौं । पूरै पार्टीरिचालन गर्ने, सुदृढ गर्ने यो प्रक्रियातिर हामी केन्द्रीत हुँदैछौं । किनकी आखिरमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अग्रदस्ता भनेको पार्टीै हो । पार्टीलाई ठिक गर्न सकिएन भने पूरै राष्ट्रलाई नै क्षति हुन्छ । हामी त्यता तिर केन्द्रीत हुन्छौं ।
May 23, 2009 Posted by ramkeshar | Interview, Politics	| Leaveacomment
Interview With Dina Nath Sharma
नेपालको अहिलेको राजनीति अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिलेको मुख्य राजनीति एजेन्डा भनेको संविधान लेखन, सेना समायोजन र राष्ट्रिय रुपमा जनताका आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्ने हो । यसको सेरोफेरोमा रहेर राजनीति क्रिया प्रतिक्रियाहरु भैरहेका छन् । हामी नयाँ संविधान लेख्न २१औं सताब्दीको नयाँ राजनीति प्रणालीमा गैरहेका छौं । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्न सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्र लागिरहेका छौ । दोस्रो रुपमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षा पुर्‍याउनको लागि सेना समायोजनको प्रक्रिया र हतियार व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रमूखरुपमा लिएर यसका लागि काम गरिरहेका छौ । तेस्रो कुरा जनताको जनचाहाना अनुसारको कार्यनीतिहरु हिजोको दिनमा जुन घोषणा भयो त्यहि नीति र कार्यक्रमहरुलाई जनताको माझमा पुर्‍याउनको लागि बजेट जनताकोबीचमा पुर्‍याउन पर्ने हुन्छ । यस काममा पनि हामी लागिरहेका छौं । त्यसैगरि जनताको प्रतिनिधिहरुमा समानुपातिक र समावेशी तरिकाले नेतृत्व गराउने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेका र्र्छौ र यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर अहिलेको राजनीति प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसैबीचमा शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्न प्रतिगामी शक्तिहरु पनि लागिरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षा पुयाउन नगरिनहुने काम भनेको सेना समायोजन हो । तर सेना समायोजको बारेका नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाकोबीच विभिन्न विवादहरु देखिएका छन् । नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टिको रुपमा तपाईहरुको कस्तो धारणा रहेको छ?
अहिले देखिएको विवाद भनेको सेना समायोजनको होइन । यो सेना भर्तीको विवाद हो । सेनाले नयाँ भर्ती गर्नु गलत हो भनेर अनमीनले पनि भनेको छ । यस्तो समयमा सेनाले सम्झौता उलंघन गरेको छ । राज्यको कुनै पनि अंगले शान्ति सम्झौतालाई उलंघन गर्छ भने शान्ति प्रक्रियमा अवरोध खडा हुन्छ कि भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कसैले पनि शान्ति प्रक्रियालाई उलंघन गर्छ भने सरकारले रोक्न पर्छ । यो जननिर्वाचित सरकार हो । संविधानभन्दा माथि कोहीपनि जान सक्दैन । सरकारले सेनालाई शान्ति सम्झौता पालना गर्नु पर्छ भन्ने निर्देशन दिने अधिकार सरकारसंग छ । त्यसैले सरकारले सेनालाई त्यही सम्झौताको पालना गर्न लगाएको हो । यो विवाद जस्तो देखिएतापनि विवाद भने होइन । यसलाई सहज र सरलिकरण गरेर लान पर्छ ।
सम्झौताको उलंघन त माओवादीको सेनाले पनि गरिरहेको समाचारहरु आइरहेका छन् । दुबै सेनाले गल्ती गर्दा सरकार किन नेपाली सेनालाई मात्र सम्झौताको पालना गर्न लागाइरहेको हो?
प्रतिक्रियावादी संचारमाध्यमहरुले शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षा पुर्‍याउन नदिनको लागि जस्ता समाचारहरुपनि प्रकाशन प्रशासण गरिरहेका छन् । त्यसैलाई सुनेको भरमा हामीले विचार बनाउन हुँदैन । त्यो केवल आरोप मात्र हो । कुनै व्यक्तिलाई संचारमाध्यमहरुले आरोप लगाउँदैमा हुँदैन त्यसलाई अदालतले प्रमाणित गरेमा मात्र यो पुष्टि हुन सक्छ ।
सरकारको निर्देशन विपरित नेपाली सेनाले भर्ती गरिरहँदा पनि किन सरकार केही गर्न सकिरहेको छैन?
नेपाली सेनालाई नियन्त्रणमा लिने रोक्ने र सेना सरकार र संविधानको मातहतमा हुन पर्छ भनेर नियन्त्रण गर्न र शान्ति सम्झौता पालना गराउनको लागि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । भर्तीको सम्बन्धमा तत्काल भंग गर्ने भन्दापनि त्यसमा आफ्नै प्रक्रियाहरु हुन्छन् । यहि प्रक्रिया अर्न्तर्गत सबै कामहरु हुन्छन् ।
माओवादीको सरकारबाट जनताले आकांक्षा गरे अनुसारको काम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यो सरकार ढल्न सक्छ भन्ने हल्लाहरुपनि सुनिन थालिएको छ । के यो सरकार ढल्न लागेको हो त?
सरकारले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा गलत हो । सरकारले अहिले गर्ने भनेको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो । संविधान लेख्ने काम भैरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको कुरा हो । शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विषेश समिति गठन भएको छ । सेना समायोजनको विषयमा छलफलहरु भैरहेको छ । सरकारको बजेट नीति र कार्यक्रम जनताको विचमा गैरहेको छ । साठीवर्षपुरा भएका दलितहरुका लागि भत्ता दिने काम भैरहेको छ । प्रत्येक गाविसमा २० लाखको दरले बजेट पुगिरहेको छ । प्रत्येक वाडाहरुमा साक्षरता अभियान अर्न्तर्गत शिक्षकहरु नियुक्ति भैसकेको छ । यि सबै सकारात्मक पक्षलाइ नहेरिकन काठमाडौंमा बसेर यहाँका विरोधि मिडियाले जे जे भन्छन् त्यसैबाट प्रभावित भएर तपाँइहरु यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यो छुटै कुरा हो । होइन भने अहिलेको सरकारले गर्ने काम ठीक ढंगले गरिरहेको छ । यसको प्रमाण तपाईहरुले पाइसक्नुभएको छ । त्यसैले सरकार ढल्ने कुनै कारण नै देख्दिन ।
माओवादी पार्टि जातियरुपमा संघियताको कुरा गरिरहेको छ । तर अन्य पार्टिको संघियता सम्बन्धी अलग अलग धारणाहरु रहेका छन् । यस्तो स्थितिमा तपाईहरुको पार्टि सबै पार्टिलाई मिलाएर कसरी लिएर जान सक्छ?
एउटै सोच र एउटै विचार हुने हो भने हामी सबै एउटै पार्टि हुने थियौं । दलिय व्यवस्थामा अलग अलग सोच र विचारहरु हुन्छन् । तर हामी २५ दलको प्रतिनिधित्व गरेको संविधानसभा मार्फ छलफल गरेर बैज्ञानिक जुन प्रणाली ठिक हुन्छ त्यहि नै लागु गर्ने हो । यसमा हामीले भनेको नै हुन पर्छ भन्ने होइन । छलफलमा सबै पार्टीलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।
तपाइहरुले जातिय आधारमा संघिएता हुनुपर्छ भन्ने किन भन्नुभएको हो?
त्यस भित्र विज्ञान छ । विज्ञान नभइकन हामीहरुले भनेका छैनौं । नेपाल बहुभाषिक , बहुधार्मिक राष्ट्र हो । त्यसकारण सम्पूर्ण वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग, भाषा संस्कृतिको सम्बोधन गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने भोली उनीहरुका विषेश अधिकारको सुनिश्चित गर्न सकिएन भने आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसैले वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग, भाषा संस्कृतिलाई सम्बोधन हुने गरी प्राकृतिक साधानहरुको समुचित वितरणको आधारमा नयाँ संरचना संगठिन हुन्छ । यसमा दलितहरु लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका छन् । उनीहरुलाई विशेष अधिकार दिएर यसको क्षतिपुत्रि हुनसक्छ ।
सरकारम एउटापनि दलितलाई समावेश गराउनुभएको छैन । कस्तो विशेष अधिकारको कुरा गरिरहनुभएको छ?
अधिकार दिने र संविधानसभामा धेरै दलितहरुको उपस्थिति गराउने र एउटा प्रतिनिधिलाई सरकारमा ल्याउने कुरा एउटै होइन । यसरी हर्ेर्ने हो भने गलत हुन जान्छ । पञ्चायत कालमा थुप्रै दलितहरु आएका थिए । के पञ्चायतले मानवहादुर विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउँदैमा दलितहरुको मुक्ति भयो र- छुवाछुतको अन्त्य भयो र – अहिले हामीमले कानुन ल्याएका छौ । हामीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले विरोध गर्दा गर्दै पनि छुवाछुत सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फ ल्याएको छ । त्यसैले माओवादीले दलितलाई सरकारमा समावेश गरायो गराएन भन्दापनि माओवादीले दलित, मधेसी, जनजातीको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि प्रयत्न गरेको छ कि छैन – र त्यस अनुसारको अधिकार र सहुलियत पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ । र यो कसले ल्याएको छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामी अरुले के भन्छ भन्नेमा बहकिएर होइन व्यवहारमा के भैरहेको छ र के भैरहेको छैन भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्छ ।
युवाहरुका लागि अहिलेको सरकारले के काम गरेको छ त?
युवाहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । तपाईले आफ्नो दक्षा अनुसरको काम गर्न सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । उद्योग वाणिज्य संघमा गएर यसको बारेमा बुझन सक्नुहुन्छ । साक्षरता अभियान अर्न्तर्गत देशभरमा ३६ हजार युवाहरुले रोजगारीका अवसर पाएका छन् । यि रोजगारीका अवसरहरु पहिलेका सरकारहरुले यसरी व्यवस्थित गर्न सकेका थिएनन् ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ?
तपाईहरु मिडियामा काम गर्नुभएको साथीहरुलाई उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । हामी अहिले नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्न गइरहेका छौं त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको भूमिका यस क्षेत्रमा रहन्छ भन्न चाहान्छु ।
May 22, 2009 Posted by ramkeshar | Interview	| Leaveacomment